Khayre Oo Muqdisho Waji Gabax Kula Noqo Day Kadib Markii Uu Fashil May Shirkii Shanta Casho Ee Garaawe Ka Socday | Raadgoob
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa galabta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kaddib shirkii fashilka iyo is afgarad la’aanta ku soo dhamaaday ee magaalada Garoowe uga socday madaxda Soomaalida Shantii cisho ee la soo dhaafay.
Ra’iisul Wasaaraha waxaa garoonka uga hortagay kuna soo dhaweeyay wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa, iyadoo aanu wax hadal ah siin warbaahinta ayaa loo galbiyay Madaxtooyada.
Madaxdii ku sugneye Garowe ayaa si kala gaar gaar ah isaga soo huleelaya magaalada Garowe, waxaa saaka ka soo tagay Madaxda Maamulada Jubbaland iyo Galmudug oo kala aaday Kismaayo iyo Nairobi.
Waxaa sidoo kale magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay subaxnimadii hore ee saakay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaay Yariisoow oo shirkaa ka qeybgalay.
Laakiin madaxweynaha dowladda Soomaaliya Madaxweyne Farmaajo ayaa wali ku sii sugan magaalada Garoowe, halkaa oo la sheegay in labada cisho ee soo socta uu sii joogi doono madaxweynuhu.
Shirka Garoowe ee u dhaxeeyay dowladda Federaalka iyo dowlad Goboleedyada ayaa natiijo la’aan ku soo dhamaaday, kaddib markii la isku fahmi waayay qodobadii laga hadlayay, waxaana caqabadaha ugu weyn ee Shirka hareeyay ka mid ahaa arrinta Maamulada Galmudug iyo Jubbaland.
Madaxweynayaasha Galmudug iyo Jubbaland oo ka hadlay fashilka shirka ayaa eedda dusha uga tuuray madaxda dowladda federaalka oo ay ku tilmaameen kuwo markii horeba aan daacad ka aheyn heshiis iyo is afgarad laga gaaro qodobbadii laga wada hadlayay.